အိမ် (Aung Din) | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်စိုးချိန် - လူဖြစ်ပြီ
မောင်စိုးချိန် - မင်းလောင်းဘယ်သူလဲ
မင်းကိုနိုင် ● ရှာကြပါဦး
အောင်နှင်းသစ် - ပူအိုက်သောစာသားများ
အိမ် (Aung Din)
အောင်ဒင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁
ကြောင် ၃ကောင်၊ ခွေး တစ်ကောင် နေလောက်ရုံ
အမိုး၊ အကာ နဲ့ ကြမ်းခင်းတော့ရှိရဲ့
မိုးသဲရင် နှင်းရိုက်ရင်ဖြင့် ချမ်းလို့တုန်
ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ငါတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံ….။
ပြိုကွဲကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ၊ စိတ်ကောက်ကြ၊ ပြန်ချစ်ကြ
ဘဝရဲ့ သင်္ခန်းစာတွေ အထပ်ထပ်ရခဲ့ကြပုံ….။
အလင်းရောင်နဲ့ အပူအအေးမျှတရမယ်…. လို့
နှစ်ယောက်က လူ့ဘဝကို အပြီးတိုင်ခွဲခွါ
ကျန်သုံးယောက်က တစ်ယောက် တစ်နေရာစီမှာ
ခွေးကလေးနဲ့ ကြောင်ကလေးတွေလဲ မရှိတော့ပါ
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမျှသာ….. ။
ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃
2 Responses to အိမ် (Aung Din)
naing lin tun on January 22, 2013 at 10:39 pm
i will love poem till i die because this is only oasis of my life.
yu mon on January 22, 2013 at 11:38 pm
ူlife is going on also the poem is never die